Madaxda Mareykanka ee geeriyooday iyagoo haya talada dalkaasi. (qeybta 1-aad)
Home /Blog/Madaxda Mareykanka ee geeriyooday iyagoo haya talada dalkaasi. (qeybta 1-aad)
Taariikhda mareykanka inta la ogyahay, waxaa Madaxweynihii ugu horeeyay ee qabta talada dalka Mareykanka uu ahaa George Washington ,kaas oo jagada madaxtinimo ee dalkaasi haayey sanadihii u dhexeeyay 1789 to 1797 .
Laga soo bilaabo Madaxweyne George Washington illaa Donald Trump,waxaa iyagoo haya talada madaxtinimo ee dalka Mareykanka dhintay Sideed xubnood oo ku fariistay kursiga Aqalka Cad ee looga taliyo bulshoweynta dalkaasi.
Afar ka mid ah Siddeedaasi waxaa lagu fuliyay shirqool khaarajin ah ama waa la toogtay.halka Afarta kale ay u dhinteen sababo la xiriira cudurro dabiici ah .
Siddeeddaasi Madaxweyne ee dhimatay sanadihii 1841-1963-dii,waxaa si kumeel gaar ah xilalkii madaxtinimo u sii waday madaxweyne ku xigeenadii jiray waqtigaasi sida ku cad dastuurka Mareykanka.
12-Madaxweyne ayaa ka badbaaday isku day dil oo ay ka dambeeyeen rag hubeysan oo lahaa ujeedooyin kala duwan.
Haddaba waa kuwaan Madaxweynayaasha u dhintay xanuunno caadi ah iyo kuwii la khaarajiyay ama la dilay.
William Henry Harrison waxa uu talada dalka Mareykanka qabtay 4-tii Marso 1841, 26-kii bishaasi waxaa ku soo booday cudurka hargabka ama durayga xilligaasina waxaa . socotay xafladda caleemo saarka.
Cudurkaasi ,waxa uun ka dhashay qabowga cimilada wuxuuna cudurkaasi waqti yar isu badalay qaarjeex ama oof-wareen
Harrison,muddo sagaal cisho ah ayuu xanuunsanaayey dhaqaatiirtiisana weey dadaaleen balse waxa uu dhintay 4-tii april 1841,kadib markii uu talada qabtay 4-tii april
Waa Madaxweynihii u horeeyay oo Mareykan ah oo dhintay isagoo talada dalkaasi haayey muddo 31-cisho ah.
Dhimashada Nadaxweyne Zachary Taylor,sii cad uma muuqato inkastoo la tilmaamay in July 4-tii 1850 uu ku dhacay calool bax kadib kolkii uu cabay cabitaanno kala duwan oo ah kuwa laga sameeyo nuucyada qudaarta,taasina waxa ay sababtay in uu fuuqbaxo,shan cisho kadibna waxa uu u dhintay xanuun lagu sheegay calolbax ama wax u eg daacuun calool.
Isla waqtigaasi waxaa soo baxay oo la isla dhexmaray warar hoose oo la xiriira in madaxweynaha la sumeeyay,isla markaana ay ka dambeeyaaan kooxo taageersanaa in ay sii jiraan adoonsiga dadka madow oo ka jiray koonfurta Mareykanka.
sanadkii 1850 bishii July 9-keedii ayuu dhintay
1865: Madaxweyne Abraham Lincoln
Dilkiisii waxa uu dhacay maalin Jimco ah bishuna aheyd April 14-keedii 1865-tii iyadoo uu soo afjarmay ama soo gabagaboobay dagaakii sokeeye ee u dhexeeyay koonfurta iyo woqooyiga mareykanka.
Dilka Madaweynahaasi waxa uu dhacay shan cisho ka hor markii uu taliyaha ciidamada woqooyiga Virginia jeneraal Robert E. Lee uu isu dhiibay General Ulysses S. Grant
Abraham Lincoln waa madaxweynihii ugu horeeyay ee lagu dilo fal gaadmo ah ama lagu qaarajiyo,waxaana lagu eedeeyay falkaasi in uu ka dambeeyay nin aktar ah oo caan ah oo lagu magcaabo John Wilkes Booth,kaas oo la tilmaamay isaga iyo taageerayaashiisuba in ay ka horjeedeen arimo ay ka mid ahaayeen xoreynta dadka adoonta ah ee madowga mareykanka,
Dilkii Madaxweynaasi waxa uu ka dhacay Washington, D bishii July 2-dii 1881-dii.
Garfield,waxaa toogtay Charles J. Guiteau,
Madaxweynahaasi waxa uu talada haayey muddo 4-bilood ah ,isagoo noqday madaxweynaha 20-aad ee mareykanka.
Garfield waxa uu dhintay 11 isbuuc kadib bishii September 19, 1881,madaxweyne ku xigeenkii xilligaasiChester A. Arthur ayaa la wareegay xilkaasi madaxtinimo
Waxaa la dilay bishii Setembar 6.1901-dii,isagoo ku jiray Maxfal ama goob lagu tuno muusikada ee kooxda Pan-American.taasoo dhacda deegaanka Buffalo ee magaalada New-york
Madaxweynaha ayaa waqtigaasi gacan-qaadayey dad ku sugnaa Tiyaatarkaasi weyn oo ay ka socotay Muusiko iyo arimo kale oo wacyigwlin ah .
,,waxaa dilay madaxweynaha nin lagu magacaabi jiray Leon Czolgosz oo ka mid ahaa koox fidnawadayaal ah.
William McKinley oo mar labaad qabtay talada waxa uu dhintay 8-cisho kadib Setembar 14-kii ,Kadib markii uu jirkiisa ku faafay cudurka kaankarada oo ay sababeen xabbaddii lagu dhuftay.
Waxa uu u dhintay wadno xanuun xilli uu ku sugnaa hotel ku yaalla magaalada San Francisco oo uu booqasho ku joogay 2-dii Augst sanadkii 1923-dii
Dhimashadiisa kadib waxaa si degdeg ah u soo baxay warar sgeegaya in la sumeeyay ama in uu isdilay
Geerida madaxeynahaasi waxaa laga qoray buuk loo bixiyay The Strange Death of President Harding ,kaas oo qoraaga uu ku sheegay in dilka madaxweynaha uu ka dambeeyay nin horay u ahaa kooxda gaangiistarada gobolka ohaio
March 29, 1945, Madaxweyne Franklin D. Roosevelt,waxa uu u dhaqaaqay magaalada Georgia si uu fasax nasasho ah u qaato kahor inta uusan ka qeybgalin shirkii Qaramada Midoobay oo ka furmayey dalka Mareykanka.
April 12, Roosevelt , waxaa ku soo boday xanuun xagga dambe ah gaar ahaan madaxa qeybta dambe ee jeegada,kadibna waxa uu ku dhacay ,dhulka isagoo ku fadhiyay kursi,daryeel degdeg ah oo ay u sameeyeen dhaqaatiirta kadib waxa uu dhintay isla maalintasi,iyadoo aan la ogaan waxa uu u dhintay,sida uu mar dambe sheegay dhaqtar Allen Drury .
Faallo lagu qoray Wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in uu dhamaaday waqtigii Roosevelt iyo waxqabadkiisii isla markaana la galay wqti cusub ama waa cusub
Madaxweyne Rosvelt oo talada dalka Mareykanka haayey muddo 12-sano ah,waxa uu ahaa ninkii ugu waqtiga dheeraa,isla markaana jabiyay madaxdii Naziga Jarmalka iyo Jabaan.
Dhimashadaasi waxa ay walwal galisay dadka Mareykanka iyo dunida kale.Bil ka yar markii ay dhimashadiisa ka soo waregtay May 8-deedii waxaa soo afjarmay dagaalkii Yurub .
Madaxweyne Harry S. Truman oo xilka la qabtay 1961-dii waxa uu ku dhawaaqay xus loogu magac daray maalinta xornimada Yurub iyo baroordiiq 30-cisho oo loo sameynaayo Madaxweynihii dhintay ee Rusvelt,iyadoo mudadaasi calanka hoos loo dhigayo
1963: John F. Kennedy[
Waxaa Madaxweynahaasi lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas maalin Jimco ah 22-kii Nofembar 1963-dii,isagoo ay la socdeen xaaskiisa Jacqueline ,Barasaabka TexasJohn Connally iyo xabno kale.
Baaritaan socday muddo toban bilood ah 1963-1964) oo ay wadeen guddi gaar ah kadib waxaa la cadeeyay in falkii lagu dilay John F. Kennedy uu ahaa shirqool khaarajin ah oo uu ka dambeeyay Lee Harvey Oswald
Ninkaasi dilay madaxweynaha waxaa isna dilay Jack Ruby kahor inta aan la horgeyn maxkamad.
1966-2004-tii dadka Mareykanka waxa ay 80% aaminsanaayeen in dilka madaxweynahaasi uu ahaa mid shirqool ah ama mid la daboolay xaqiiqadiisa.
Qeybaha lagu tuhmay in ay ka dambeeyaay dilka shirqoolka ah ee madaxweynahaasi ,waxa ay ahaayeen madaxweyne ku xigeenkii xilligaasi Lyndon B. Johnson sirdoona mareykanka ee CIA ,Mafiyada, KGB.madaxeynihii Cuba Fidel Castro ,maamulihii FBI,iyo kuwo kale.
La soco qeybta 2-aad khamiista
Shire Xasan Kulmiye
Haweeneey Shiinees ah oo aqoon laheyn oo soo saartay Daawada Malaariyada
Mo Farah:Mucjisada Rio de Jenero